Puntland oo aas qaran u sameysay taliyihii hore ee ciidamada Daraawiishta - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo aas qaran u sameysay taliyihii hore ee ciidamada Daraawiishta
January 24, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo hortaagan meydka Janaraal Carays oo lagu duubay calanka Puntland. [Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah aas qaran u sameysay taliyihii hore ee ciidamada Daraawiishta Janaraal Cabdullaahi Cali Mire “Carays”, kaasoo ku dhintay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland Arbacadii.
Taliyihii hore ayaa lagu aasay qabuuro kuyaala duleedka magaalada Garoowe, halkaas oo Madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Siciid Deni iyo madaxweynayaashii hore Cabdiweli Maxamed Cali iyo Cabdiraxman Maxamed Faroole ay ka qeybgaleen.
Masuuliyiin kale oo katirsan haayadaha dowladda iyo saraakiisha ciidamada ayaa sidoo kale ka qeybgalay aaska.
Wuxuu ku dhashay miyiga gobolka Mudug qiyaastii 1948.
Waxa uu ciidamada milatariga Soomaaliya ku biiray 1971, waxaana tababar muddo 7 sanno ah uu ku soo qaatay dalka Ruushka.
Markii la asaasay jabhadii SSDF ayuu ku biiray, waxaana uu kamid noqday saraakiishii sare ee jabhada.
Waxa uu kamid ahaa asaasayaashii dowladda Puntland 1998, waxaana uu noqday taliyihii ugu horeeyay ee ciidamada Daraawiishta.
Janaraal Carays waxa uu la taliyaha dhanka amniga kasoo noqday xukuumadihii Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo Cabdiweli Maxamed Cali.
Taliyihii hore ee ciidamada Daraawiishta Puntland Janaraal Carays oo geeriyooday
Marti sharaf ka socota Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Garoowe u yimid ka qeybgalka caleemo-saarka madaxweynaha Puntland